LAKTOBIFADOL EE LO'DA: TILMAAMAHA ISTICMAALKA - XOOLAHA
Sida loo isticmaalo Lactobifadol ee lo'da iyo weylaha
Marar badan, si loo soo celiyo dheef-shiidka caadiga ah ee lo'da, isticmaalka probiotics ayaa loo baahan yahay.
Daawada Laktobifadol, oo ka qaybqaata habka caadiga ah ee microflora ee muruqyada iyo mindhicirrada, waxay ku raaxaystaan ​​waxtarka iyo caanaha beeralayda.
Maqaalkeena waxaan kuu sheegi doonaa waxa ay tahay noocyadan xawilaadaha ah iyo bixinta tilmaamaha isticmaalka.
Diyaargarowga waxaa ku jira bifidobacteria nool acidophilic, kuwaas oo horay loo qallajiyey iyada oo la isticmaalayo habka suuqyada loo isticmaalo siddeed dhirta. 1 g waxaa ku jira unugyada nool ee bifidobacteria (qiyaastii 80 milyan) iyo lactobacteria (qiyaastii 1 milyan).
Waa muhiim! Kala saar Lactobifadol ma noqon karo dareer kulul, sababtoo ah bakteeriyadu ku jirta ayaa ku dhiman doonta. Isticmaal biyo ama caano heerkulka qolka.
Intaas waxaa sii dheer, halabuurka waxaa calaamad u ah jiritaanka habdhaqanka dhexdhexaadinta iyo walxaha qashinka: asiidhyada asaasiga ah, vitamins-ka, dabeecadaha, qaababka prebiotic ee lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in si degdeg ah u-qabsashada bakteeriyada mareenka caloosha ee xayawaanka iyo waxtarka sare ee probiotic. Halabuurka Lactobifadol kuma jiraan jeermiska, jeermisyada, hormoonnada iyo kiciyaasha kale ee la mamnuucay in loo isticmaalo wax soo saarka xoolaha nool ee dabiiciga ah.
Akhri wax ku saabsan cudurrada faafa ee infekshanka iyo kuwa aan caan ahayn ee lo'da.
Foomka shaacinta: Ugu horreyntii, diyaarinta foomka budada lacag la'aanta ah ee qashinka ah waxaa lagu buuxiyaa bac caag ah oo 50 g ah, taas oo markaa lagu rakibay baakad labaad oo laga sameeyay kaarar. Baakooyinka 0.1kg, 0.5 kg iyo 1 kg kuma xirna weel labaad. Qaybta baakad kasta waxay ka kooban tahay tilmaamo isticmaalka.
Lactobifadol wuxuu leeyahay sifooyinka daawooyinka soo socda:
waxay gacan ka geystaan ​​kordhinta difaaca jirka iyo iska caabida jiritaanka;
Sababtoo ah saameynteeda, xuubka mindhicirku wuxuu ku xiran yahay microflora caadi ah, taas oo ka hortagaysa horumarinta bakteeriyada waxyeellada leh;
waxay gacan ka geysaneysaa dib u soo celinta microbiocenosis caadi ah maqaarka iyo furanka furan, wuxuu saameyn wanaagsan ku yeeshaa habka urojinimada;
waxay ka caawisaa soo celinta rabitaanka cuntada, waxay hagaajisaa dheef-shiidka ka dib cudurro hore, isticmaalka antibiotics;
iyada oo ay sabab u tahay soo dhaweynta, koritaanka, xaaladda caafimaadka iyo horumarinta lo'du waa la hagaajiyay;
waxay ka caawisaa hagaajinta xaalada maqaarka iyo joodariga;
waxay caadi u tahay dheef-shiid kiimikaad, waxay gacan ka geysataa isugeynta macro- iyo maadooyin isku dhafan;
waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta dheef-shiid kiimikaad-fosfooraska, qaabka laf-dhabarka iyo carqaladda;
waa ka hortagga cayilka, caadi u ah miisaanka xayawaanka.
Ma taqaanaa? Qiyaas ahaan badhkii nuska cunniga cunnadu wuxuu ka dhigayaa qiyaastii 90 dhaqdhaqaaqa jawska.
Qiyaasta, tilmaamaha isticmaalka
Tixgeli sida iyo qiyaasta loo baahan yahay si loo siiyo daawada xayawaanka, iyadoo ku xiran da'da.
Weylaha Hal qiyaas oo ah 0.1-0.2 g / kg. Waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo daawada 2 jeer maalintii, ka dib markii ay ku jirto caano ama dambarka. Qaadashada Laktobifadol waa lagama maarmaanka u ah qandhada si loo hubiyo in waxqabadka microflora caadiga ah ee xiidmaha isla markiiba ka dib dhalashada, ka dibna lagu hagaajiyo dheefshiidka.
Cows Hal qadar waa 1 qaado oo qofkiiba. Daawada waa in la siiyaa subaxdii, isku dardarida quudinta xayawaanka ama diirada. Probiotic waxay ka caawisaa kicinta dheefshiidka waxayna sidoo kale hagaajineysaa halabuurka microbial. Natiijada qiimaha nafaqada ee kordhay, ayaa tilmaamaya wax soo saarka wax soo saarka.
Dibiga. Mudo 10 maalmood ah waa lagama maarmaan in la siiyo 1 qaado, adoo isku darka daawada ku siinaya, laba jeer maalintii. Kadibna qiyaasta daawada ayaa loo yareeyey 1 qaado, taas oo la siiyaa xayawaanka 1 jeer maalintii. Isticmaalka daroogadu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad bedesho microflora fursadaha, kicinta dheefshiidka, hagaajinta xaaladda guud ee xayawaanka iyo hagaajinta tayada shahwada.
Daawada waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin daaweeyn, haddii ay jiraan calaamadaha shubanka, daaweynta antibiyootigga ayaa la sameeyaa, waxaa jira qulqulo, inta lagu jiro waxqabadyada qalliinka. Xaaladaha noocaas ah, waxaa lagu talinayaa in la siiyo xayawaanka 0.2-0.4 g / kg maalin kasta ilaa dhererka caadiga ah la soo celiyo (qiyaastii 7-10 maalmood).
Baro sida loo helo gooryaanka ka soo baxa lo'da iyo weylaha, iyo sidoo kale waxa la sameeyo shubanka shimbiraha.
Daryeelka Shaqsiga ee Shaqada
Xeerarka aasaasiga ah ee la shaqeynta daroogada waxaa ka mid ah:
inta lagu jiro shaqada waxaa reebban in la cuno, cabo cabitaano, qiiq; Dhammaan nadaafadda waa in lagu sameeyaa gacmo gashi, inkastoo xaqiiqda ah in daroogadu aysan waxyeello u keenin bani-aadamka;
ka dib marka la dhamaystiro shaqada daawada, gacmaha waa in si fiican loo dhaqo saabuun;
haddii daroogada maqaarka ama xuubka maqaarka uu ku dhacay, waa inaad isla markiiba ku dhaqdaa biyaha hoostiisa.
Ma jiraan wax khilaaf ah oo loo isticmaalo isticmaalka daroogada, laakiin mararka qaarkood waxaa laga daaweyn karaa dulqaad la'aan. Laguma talineynin in lagu daro daawada iyada oo la adeegsanayo afka afka antibiyootikada, iyo sidoo kale xaaladaha halka walaxyada kale ee kiimiko ah loo isticmaalo.
Waa muhiim! Maalmaha ugu horreeya ee soo dhoweynta, dabeecadda kursiga ayaa laga yaabaa inay isbedesho - ha ka baqin tan. Astaamahani wuxuu ka hadlaa habka u-adkeysiga noolaha ee daroogada, ka dib maalmo yar gudahood hawsha mindhiciradu waxay ku noqdaan caadi.
Bacaha daboolay daroogada waxaa lagu keydin karaa 1 sano qol qallalan oo leh heerkul hawo + 2-10 ° C Inta lagu jiro gaadiidka, heerkulka hawadu waa inuusan dhaafin +25 ° C, waqtiga ugu badan ee gaadiidka waa 15 maalmood.
Daawada Laktobifabol ma laha wax lamid ah, laakiin maqnaanshaha daroogada noocan oo kale ah, waxaad isticmaali kartaa isku mid ah halabuurka iyo ficilka, sida:
Olin. Sida qiyaasta ka hortagga, waxaa haboon in la siiyo 3 g per weyh 2 bilood. Haddii daaweyntu ay lagama maarmaan tahay, qiyaasta maalin walba waa 15 g halkii qof. Daawada waa in lagu kala diraa biyaha ama ku dar caanaha.
Bioximiin. Kaluunka waa in la siiyaa 5-10 g maalin kasta 1-4 asbuuc, dadka waaweyn - 15 g maalintiiba 1-2 bilood.
Bacelle Calafku wuxuu si tartiib tartiib ah u kordhi karaa qiyaasta maalin kasta 10 g halkii qofba ilaa 25 g. Bulls-saarayaasha ayaa lagula talinayaa inay bixiyaan 50 g maalintii, iyo lo'da inta lagu jiro xilliga nuujinta - 50-60 g maalintii.
Ma taqaanaa? Dadku waxay bilaabeen in ay gurtaan lo'da ilaa 8 kun oo sano ka hor.
Daawada Lacobifadol waa tan ugu waxtarka badan ee waxtar leh ee qiimo la awoodi karo. Isticmaalkeeda caadada ah waxay gacan ka geysan doontaa ilaalinta xaalada wanaagsan ee xayawaanka iyo hagaajinta waxqabadka.